Baarlamaanka Galmudug oo ansixyay Guddigii Doorashooyinka ee Sheekh Shaakir - Awdinle Online
Home News Baarlamaanka Galmudug oo ansixyay Guddigii Doorashooyinka ee Sheekh Shaakir
Baarlamaanka Galmudug oo ansixyay Guddigii Doorashooyinka ee Sheekh Shaakir
October 26, 2019 (AO) – Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa maanta Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug hor geeyay Guddigii uu dhawaan Magacaabay ee doorashooyinka.
Sida aad la wada socotaanba Madax Xukuumadda Galmudug ayaa toddobaadkii hore magacaabay Guddiga Doorashooyinka, habeen ka dib markii uu fashil ku soo dhamaaday kulan uu Magaalada Dhuusamareeb kula qaatay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Cabdi Maxamed Sabriye iyo Sheekh Shaakir.
110 xildhibaan ayaa ogolaatay in uu Sharci Yahay Gudigga Farsamo ee uu Magacaabey Sheekh Shaakir waxaana Diiday 3 xubnood, Sidaas waxaa Ku dhawaaqey Guddoonka Shir Gudoominayay Kulankan Baarlamaanka.
Guddiga uu Sheekh Maxamed Shaakir uu magacaabay ayaa waxay dooran doonaan guddoon, iyaga oo bilaabi doono soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Sheekh Shaakir ayaa u mahad celiyay Xubnahan Baarlamaanka Galmudug ee Taabacsan Ahlusunna waxaana uu Tilmaamey in ay Ka soo Baxeen Shaqo Culus oo looga Fadhiyay.
Talaabada lagu ansixyay Guddigan ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli Magaalada Dhuusamareeb ay ku sugan yihiin Guddiga Farsamada Dhismaha Galmudug, ee ay soo magacawcay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya.
Warar sugan kala awdinle.com
Previous articleBaaq ka soo baxay shirka aqoonsiga & horumarka Haweenka ee siyaasadda dib u eegista Dastuurka
Next articleUN Team Calls For Review Of Terms On Somalia’s Arms Embargo